Izicelo ezi-5 ezilungileyo zokubala iikhalori kwi-Android | I-Androidsis
Ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zokubala iikhalori kwi-Android
UAron Rivas | 11/06/2021 06:00 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Esinye sezixhobo ezilungileyo zokuzilolonga kunye nokubeka esweni umsebenzi, impilo kunye nemidlalo, ngaphandle kwamathandabuzo, ngumnxeba. Enkosi kuzo zonke izicelo zomzimba onazo kwiGoogle Play Store, ivenkile egcwele ulwandle lweapps ezikwelo nqanaba kwaye isinika iimetriki ezinomdla ezinje ngokubala kweekhalori ezisetyenzisiweyo ngexesha lokutya nangexesha lokwenza ezemidlalo, umthambo kunye nemisebenzi, kunye nokunye.
Kule post yokudibanisa sidwelisa ezona zi-5 zibalaseleyo zokusebenza zokubala ezikhoyo namhlanje kwiVenkile yokuDlala ye-Android. Zonke zisimahla, kwaye kwangaxeshanye, zinokukhutshelwa okuninzi, izimvo, amagqabantshintshi kunye nokuhlelwa okuqaqambisa njengezona zilungileyo kwivenkile nohlobo lwazo.
Apha ngezantsi uzakufumana uthotho Ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zokubala iikhalori zeefowuni ze-Android. Kubalulekile ukuba uqaphele, njengoko sihlala sisenza, ukuba bonke abo uya kubafumana kule post yokudibanisa bakhululekile ukukhuphela. Ke ngoko, awuzukunyanzela ukuba wenze nayiphi na imali ukuze ufumane enye okanye zonke. Nangona kunjalo, enye okanye ezingaphezulu zinokuba nenkqubo yentlawulo encinci encinci, enokuvumela ukufikelela kumxholo ongaphezulu ngaphakathi kubo, kunye neprimiyamu kunye neempawu eziphambili. Ngokufanayo, akuyomfuneko ukwenza nayiphi na intlawulo, kufanelekile ukuphinda. Ngoku ewe, masifike kuyo.
1 Ikhawuntari yeekhalori
2 Yilahle! Ikhawuntari yeekhalori
3 YAZIO: I-Calorie Counter yokuThoba umzimba kunye nokutya
4 Ikhawuntari yeekhalori
5 Ikhaltyhuleyitha yeHiKi yokubala
I-Calorie Counter yinkqubo engazukubala igama. Owona msebenzi uphambili woku, enyanisweni, kukubonelela ngeekhalori ezisetyenzisiweyo kwimisebenzi yemihla ngemihla. Sisixhobo esihle kakhulu ukufezekisa iziphumo zomzimba ngexesha elifutshane, njengoko ikubonisa ukuba ungakanani umzamo owenzileyo, obalulekileyo ukuze ungadluli kuwo.
Kwakhona, Inesiseko esikhulu sendawo yokutya. Kule nto uyakufumana ukutya okungaphezulu kwezigidi ezi-6 kunye nokutya, zonke zinamaxabiso esondlo afanelekileyo anje ngeFat, iiProteni kunye neeCalori ezinokubonelelwa xa uzitya, ngokusekwe kwidatha yomndilili, ewe.
Ngendlela efanayo, yindlela efanelekileyo yokulinganisa ukuba utya malini kwisidlo ngasinye, ukuze usetyenziselwe ukunciphisa okanye nokuba utyebe, ukuba leyo yinjongo yakho kunye nenjongo. Nangona kunjalo, Abasebenzisi ikakhulu basebenzisa le khawuntari yekhalori ukunciphisa amafutha emzimbeni, ngokomgaqo. Ungangena ukutya oza kukutya kwisidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa; emva koko, unokugcina izinto ozithandayo kwi-app.
Le app ixhaphake kakhulu kuba inephepha lewebhu elizinikeleyo, onokulungelelanisa ngokulula ngalo, ukuthintela ukulahleka kwedatha yakho ukuba iselfowuni yakho ifumana ingozi okanye ubusela ngenxa yogcino ongalwenza. Ngaphandle koko, ukukhuthaza abanye abahlobo ukuba balandele ukutya okusekwe kwiikhalori ezisetyenzisiweyo, ungazongeza kwisicelo sokulandela kunye nokwabelana; Ukutya nabo!
I-Calorie Counter ikwalandelela ezinye iintlobo zezondlo ezifana neecarbohydrate, iswekile, ifayibha, icholesterol kunye nokunye. Kuza nomfundi webhakhowudi ovumela ukukhangela ukutya okufumaneka kwiziko ledatha; Skena ukutya okuthengiweyo kwaye kuya kuvela kwisicelo kunye nayo yonke idatha yakho. Kwelinye icala, kukho ikharityhuleyitha yokubala elinganisa kwaye ibala izakha mzimba, kunye nomxholo wekhalori kunye nesondlo.
Ngakolunye uhlangothi, Inokuzilolonga okungaphezulu kwama-350, inokugcina idatha yomzimba wakho njengobunzima kunye nomlinganiso, kunye nokunye. Le app yenye yezona zinto zibalaseleyo kudidi lwayo, kwaye ayenzelwanga nto ukunceda amawaka abasebenzisi emhlabeni ukuba balahlekelwe ngaphezulu kwe-90 yezigidi zeekhilogram.
Umthuthukisi: Imbuyekezo MyFitnessPal, Inc.
Yilahle! Ikhawuntari yeekhalori
Enye insiza enkulu yokubala iikhalori, ukutya ukutya kunye nokunciphisa ubunzima bomzimba yiLose It! Ikhawuntari yeCalorie, usetyenziso olunokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezili-10, amanqaku eenkwenkwezi ayi-4.6 kwiVenkile yokuDlala kunye nangaphezulu kwe-110 lamawaka eentetho ezincomekayo kwivenkile ye-Android.
Ukufikelela kwisisindo sakho esifanelekileyo akuzange kube lula. Ukuphulukana Nayo! Unokurekhoda idatha yomzimba wakho njengemilinganiselo, ubunzima kunye nokunye, ukuze umisele iinjongo kunye neenjongo onokuhlangabezana nazo ngexesha elifutshane neliphakathi okanye, ukuba uyafuna, kwixesha elide. Kamva ngokulula unokugcina umkhondo wobunzima bakho, umsebenzi kunye nokusetyenziswa kweekhalori.
Olu hlelo lokubala lweekhalori lunemisebenzi kunye nemisebenzi ebandakanya iskena sebhakhowudi ukurekhoda ukutya oza kukutya kwaye ubonise ixabiso laso lekhalori kunye nesondlo (eziyimfuneko ukuba ufuna ukwenza ukutya okuthile ukuthoba okanye ukuphakamisa ubunzima) .obunzima). Indawo yokugcina ukutya kwesi sicelo inekhathalogu engaphezulu kwezigidi ezingama-27 kwezi zivela kwihlabathi liphela, ke kunzima kakhulu ukuba ungafumani nanye, kwaye kuncinci ukuba kuqhelekile njengeziqhamo, umzekelo.
Olunye ugqaliselo lolu hlelo lokusebenza lujongano lwayo, olulula kakhulu kwaye kulula ukuluqonda. Inepaneli ephambili elungelelanisiweyo kunye namacandelo aneenkcukacha kuyo yonke inkqubela yakho, inkqubela phambili kunye nolwazi malunga nokutya kunye nemilinganiselo yomzimba wakho.
Umthuthukisi: IfitNow, Inc.
YAZIO: I-Calorie Counter yokuThoba umzimba kunye nokutya
I-YAZIO ibonakala njengenye iapps ebalaseleyo yokubala iikhalori kule post yokudibanisa, yiyo loo nto siyinika indawo efanelekileyo ngeli xesha, kuba sisixhobo sokomelela komzimba onokugcina umkhondo kuyo yonke ikhalori oyityileyo Usuku nosuku. Ikwabonelela ngokulandela umkhondo okhawulezileyo, nangaphezulu kwe-20 izitya zokuzila.
Kwakhona, I-YAZIO iyakwazi ukubona imisebenzi oyenzayo mihla le njengokuhamba, ukubaleka kunye nokunye, Ukwenza uyazi ngamaxesha onke ukuba zingaphi iikhalori ozitshisayo. Njengokuba oko kwakungonelanga, inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokunciphisa umzimba, kodwa ayisiyiyo le kuphela, kodwa ikwakhona nokutyeba, ukuba yile nto uyikhangelayo. Ikwanayo ikhathalogu yeeresiphi kunye nezondlo kunye nokutya okunempilo okuya kukunceda ufezekise loo njongo uyifunayo.
YAZIO nayo iza nayo imisebenzi yokuzila ukutya. Ngale ndlela, inexesha eliphakathi, izikhumbuzo, izilumkiso kunye nezaziso, inikezela ngolwazi oluneenkcukacha malunga neenkqubo zomzimba ngexesha lokuzila ukutya, ikhuthaza ukuzilimaza kunye ne-ketosis, kwaye ibonelela ngohlalutyo olubanzi lokuzila ukutya. Ukongeza, iza neeresiphi ezingaphezu kwe-1000 kuko konke ukutya kosuku, kunye nesicwangciso sokutya, imisebenzi, iingcebiso zemihla ngemihla kunye namaqhinga, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Esi sicelo, nangona sinegama elifanayo nelokuqala, inemisebenzi eyahlukeneyo, nangona inenjongo enye, kunjalo Kukulungele ukutya ukutya kunye nokunciphisa amanqatha kunye nobunzima bomzimba. Ngesi sixhobo somzimba uya kuba nakho ukwenza isicwangciso esisesakho sesondlo, esisekwe kwimibuzo emininzi ekufuneka uyiphendulile, kwaye iya kukunceda kwinjongo yakho. Le app ikwalawula iikhalori, iiproteni kunye namafutha owasebenzisayo.
Ngekhalori yekhalori, awuyi kuba nakho ukugcina ulawulo oluchanekileyo lwayo yonke into oyityayo kunye nexabiso lesondlo elikunika lona. Unako ukugcina ubunzima obufunayo-xa ungafuni ukunciphisa okanye ukwandisa - kwaye ufumane ubunzima bomzimba. Ukongeza, ikunika izidlo ezahlukeneyo, ngokweemfuno zakho: ezinye zisekwe kwiicarbohydrate, ezinye kwiiproteni, njalo njalo ...
Sisicelo sokubala sekhalori esisebenzayo nesisebenziseka lula se-Android.
Ikhaltyhuleyitha yeHiKi yokubala
Ukugqiba esi sithuba sokudityaniswa kwezona zibalo zibalaseleyo zeekhalori zee-smartphones ze-Android, sine-HiKi Calorie Calculator, usetyenziso oluza kusinceda ukuba sinciphise ubunzima, nkqu nakwabo banengxaki nayo, njengoko abanye abantu bekwenza kube nzima ngakumbi kunabanye .
Esi sicelo, njengoko sinokubona kwigama, Inekhalityhuleyitha yeekhalori ezisetyenzisiweyo ezisivumela ukuba silawule ukutya kwethu nayo yonke into esiyityayo imini yonke, Ikwasinika ulwazi oluyimfuneko malunga ne-GWP, ipesenti yamafutha omzimba xa kuthelekiswa nobunzima bomzimba. Ukuthandwa kwale app kuqinisekisa ukuba kusebenza njani ukufezekisa ubungakanani obufanelekileyo kunye nobunzima; Sithetha ngamanqaku aphezulu kunye aphezulu eenkwenkwezi ezi-4.8 kwiVenkile yokuDlala.
Iimpawu eziphambili kunye nemisebenzi yesi sicelo sokuqina komzimba zezi zilandelayo:
Ukuphulukana nobunzima kunye neetshathi zesondlo kunye neenkcukacha-manani
Ngenisa ukutya kwesi siza kwaye ufumane amakhonkco kuyo
Ukunika ingxelo ngokusetyenziswa kwekhalori kwimisebenzi eyahlukeneyo nakwimidlalo enjengokubaleka nokuhamba
Ukumiselwa kwemida eguqukayo yeekhalori, iiprotein, amafutha kunye neecarbohydrate
Ukutya kweekhalori kunye nokutya okulungeleyo, isiseko semveliso enkulu
Isebenza ngaphandle kwe-intanethi, idatha igcinwa kwisixhobo
Ukubalwa kweeyunithi zesonka kwizidlo zeswekile
Ukubalwa kwesalathiso sobunzima bomzimba, ipesenti yamafutha, imigangatho yeekhalori kunye nePGC
Isalathiso sokutya se-glycemic kunye nomthwalo we-glycemic
Ukhetho lolwazi malunga nesondlo kunye nokuba sempilweni
Useto lwesahlulo sobunzima kwiimveliso ezahlukeneyo
Imitha yamanzi ngosuku
Iforamu yokubuza imibuzo
Ungqamaniso nezinye izixhobo zakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zokubala iikhalori kwi-Android
Ezi zintandathu zokusebenza zokubhukuda ze-Android
Ukuphononongwa kwe-ZMI PurPods Pro, ukusebenza kunye nexabiso